The Ịgachi Ụzọ Kọwaa Cache on iPhone
Mgbe ị na-agagharị na internet na gị iPhone, ọmụma na-anakọtara na echekwara site nchọgharị banyere ndị nile na weebụ ị gara iji quicken usoro nke loading dị ka ị na-ekpeghachi usoro. Ọ bụ ezie na ịchekwa ọmụma gị cache bụ keuru na otú ahụ, ọ na-ewe nza nke free ohere na gị iPhone.
Otú ọ dị, luckily nchọgharị gị iPhone nwere ike ikwe ka nkpochapụ nke cache na-eme ka free ohere ọzọ maka gị. Lee ndị nzọụkwụ egosi gị otú ị ikpochapụ cache na 3 dị iche iche nchọgharị na gị iPhone.
Mepee nchọgharị na enweta na chrome NchNhr bọtịnụ nke na-hụrụ na elu nkuku aka nri.
Enweta Ntọala nke a pụrụ hụrụ ma ọ bụrụ na ị pịgharịa ala menu.
Enweta nhọrọ nke Nzuzo n'okpuru 'elu' ngalaba.
Enweta nhọrọ Doro Anya Cache dị na Doro Anya Nchọgharị Data ngalaba.
Tinyegharịa na enweta Doro Anya Cache ọzọ iji gosi na ihichapụ cache.
Mepee nchọgharị na enweta na Setting icon hụrụ na ala nke ihuenyo.
Enweta Ntọala nhọrọ si ọzọ ihuenyo nke ga-emeghe menu nke ntọala ngalaba.
Enweta na na ngalaba Nzuzo Nhọrọ hụrụ na elu nke General ntọala.
Enweta na Doro Anya Cache bọtịnụ nke ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ mgbe ị na pịgharịa gaa na ala ka ihichapụ cache.
Enweta na nhọrọ nke Ntọala hụrụ na Home ihuenyo.
Gbadaa na na ala ruo mgbe ị na Safari na enweta na ya. Ọ ga-bugota menu nhọrọ.
Enweta na Doro Anya Kuki na Data nke ị ga-pịgharịa gaa na ala a bit. Dị ka ị na-enweta, a igbe ma ọ bụ window ga-gbapụta ebe mkpa ka ị enweta na Doro Anya Kuki na Data iji gosi. Usoro a ga-ikpochapụ gị cache.
Olee otú Kọwaa Cache on iPhone kpamkpam
E wezụga ekpocha cache na gị iPhone mgbe ụzọ, e nwere ihe ka irè ngwaahịa, ya bụ, Wondershare SafeEraser, nke na-enyere gị aka ikpochapụ cache na-adịgide adịgide, adịru agbakwunye ihe nche n'otu oge.
Gịnị bụ Wondershare SafeEraser?
Wondershare SafeEraser bụ ngwaahịa e mere kpọmkwem iji chebe onwe onye ọmụma nke ọrụ na mobile ngwaọrụ. The okwuntughe na anyị na-eji maka-egbu osisi na dị iche iche akaụntụ dị ka ichekwa ego na bank akaụntụ, email, ịkparịta ụka n'Ịntanet saịtị na ndị ọzọ na akụkọ ndị recoverable n'agbanyeghị na anyị ihichapụ ha.
Wondershare SafeEraser emesi nchekwa site ihichapụ ihe ọmụma nile kpamkpam na-adịgide adịgide. Ọ ana achi achi nchekwa nke gị ozi site na juputara ekpocha nchọgharị mere eme, caches na faịlụ.
Wondershare SafeEraser nwere nnọọ elu àgwà atụmatụ nke bụ dị ka e kwuru n'okpuru ebe a.
1-Pịa Hichaa: Hapụ a otutu ohere na nanị otu click.
Photo Compressor: mpikota onu photos na-ekwe ka ndị ọzọ ohere nchekwa.
Ihichapu Private Data: ihichapu gị onwe data-adịgide adịgide.
Ihichapu ehichapụ faịlụ: ihichapụ niile faịlụ chịkọbara na ahịhịa nchekwa nke ngwaọrụ gị na-adịgide adịgide.
Ihichapu All Data: hichapụ ihe niile onye data kpamkpam na-enweghị na-eweghachiri na dịrị ka ụlọ ọrụ ntọala.
Olee otú iji Wondershare SafeEraser ikpochapụ cache on iPhone na-adịgide adịgide ma ọ bụ kpam kpam
Nzọụkwụ n'okpuru ga-egosi gị otú ị ikpochapụ cache kpamkpam na enyemaka nke Wondershare SafeEraser. Anyị ga na-eji nhọrọ ma ọ bụ atụmatụ nke ihichapu Private Data n'ihi nzube a dị ka ọ na zaa nile dị otú ahụ data na ike ga-ewere dị ka Private dị ka nchọgharị akụkọ ihe mere, cache wdg
Download na wụnye ngwa - Wondershare SafeEraser na kọmputa gị site na ịpị ebe a.
Mgbe wụnye Wondershare SafeEraser na PC gị na / Mac, na-agba ihe omume.
Iji eriri USB, jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa.
Isi ngwa window ga-akpaghị aka gbapụta dị ka ngwaọrụ gị a ghọtara.
Ihichapu Private Data
Pịa ihichapu Private Data hụrụ na nri nke isi window.
Usoro ihe omume ga iṅomi ma nyochaa data ẹdude ke ngwaọrụ.
Gị onwe data ga-edepụtara ke edemede ozugbo ngwaọrụ na-scanned. Họrọ ụdị nke data na ị chọrọ ihichapu na pịa ihichapu Ugbu a iji wepụ onwe data.
A ozugbo ga-emere pịnye okwu ahụ 'Nhichapụ' tupu ihichapụ gị data-adịgide adịgide. Lelee foto dị ka e n'okpuru.
E ị na-aga, na na i ehichapụ niile cache na gị iPhone na ala na ngụkọta obi ike na gị onwe data bụ nchebe na nke onye ọ bụla aka na-adịghị na-elu ọ bụla mmezi ohere na gị iPhone.
> Resource> ihichapu> Olee otú iji Kọwaa Cache on iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6/6 Plus